प्रधानमन्त्री ओली सँगको विशेष अन्तर्वार्ता; प्रहरी र सिडिओलाई थाहा नभएको घटनामा पहिल्यै काठमाडौँदेखि पत्रकार कसरी पुगे ? - Jhilko
प्रधानमन्त्री ओली सँगको विशेष अन्तर्वार्ता; प्रहरी र सिडिओलाई थाहा नभएको घटनामा पहिल्यै काठमाडौँदेखि पत्रकार कसरी पुगे ?
काठमाडौं, ७ बैशाख । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट बच्न नेपालमा सुरक्षाका उपाय अवलम्बनसहित रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका काम भइरहेका छन्।
लकडाउन त आवश्यक नै देखिन्छ तर यसबाट परेका अरू असर पनि देखिन थालेका छन्। हुन त, विश्वका ठूला मुलुकमा पनि यो समस्याको विषय भएको छ। के लकडाउनलाई फरक रूपमा वा खुकुलो पार्ने सोच्नुभएको छर ?
कोभिड–१९ को उपचारका निम्ति हालसम्म औषधि वा खोपको त विकास भएको छैन। तर, पिपिइदेखि अन्य परीक्षणका सामग्रीको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन हुनसकेको छैन। अर्कातिर खरिदको विषय पनि विवादमा छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छर ?
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदूर, श्रमिक र अन्य बेरोजगारहरु काठमाडौँबाट गाउँ जान वा भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रममा लामो पैदलयात्रा तय गर्नुपरेको कष्टपूर्ण दृश्य देखिएमा छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा सूचना दिऊँ। हेल्लो सरकार छ। या अरु माध्यम हुन सक्छन्। सिसीएमसीमा २० जना मान्छे २४सै घण्टा स्ट्याण्डबाइ बसिरहेका छन्। त्यहाँ खबर गरौँ। बिजोग दृश्यमा रमाइलो मान्नेभन्दा पनि यसलाई रचनात्मक रूपमा समाधान गर्न लाग्न सकिन्छ। प्रहरीलाई थाहा नदिइ एकाएक धादिङको सडकमा केही यात्रु कसरी देखिए ? अनि प्रहरी र सिडिओलाई थाहा नभएको घटनामा त्यहाँ पहिल्यै काठमाडौँदेखि पत्रकार कसरी पुगे ? के यो रहस्यपूर्ण छैन र ?
लकडाउनको बेला एनआईसी एशियाबैंकल व्यवसायीहरूलाई QR Code ​​​​​​​ प्रदान गर्ने
गृहमन्त्री बादलले रोपे एभोकाडो
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सिंहदरबार परिसरमा बिरुवा...
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले ५० परिवार गरिव मुसहरहरुलाई सुविधायुक्त घर त बनाइदिए...